यौन-स्वास्थ्य Archives - KTMreports.com
काठमाडौं, । प्रहरीले काठमाडौंका होटल तथा गेष्टहाउसमा नियमित रुपमा छापा हान्न हान्न थालेको छ। शनिबार र आइतबार ६४ वटा होटल तथा गेष्ट हाउसमा छापा हानेको छ।५० शंकास्पद व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। होटल तथा गेष्ट हाउसमा अपराधिक गतिविधि हुने गुनासोको आधारमा छापा हान्ने अभियान सुरु गरिएको महानगरीय प्रहरी परिसर ...
काठमाडौं। अधिकांश नेपालीहरुले खाजाको रुपमा प्रयोग गर्दै आएको चाउचाउकै कारण मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर गरी प्राणघातक रोगको शिकार हुनसक्ने चेतावनी शोधकर्ताहरुले दिएका छन् । अमेरिकाको बेलर विश्वविद्यालय मेडिकल सेन्टरका शोधकर्ताहरुले गरेको एक अनुसन्धानबाट चाउचाउको सेवनले हृदयाघातदेखि मधुमेहसम्मका प्राणघातक रोग निम्त्याउन...
यौन दुर्बलताले धेरै मानिस पीडित छन् । यसको उपचारको लागि कतिपयले बजारमा पाइने बिभिन्न प्रकारका औषधी प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् । यस्ता औषधीको प्रयोगबाट दीर्घकालीन रुपमा स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्दछ ।तनावपूर्ण जीवनशैली र अव्यवस्थित खानपानले सेक्स शक्तिमा ह्रास आइरहेको हुन्छ । यसको उपचारमा मानिसहरुले थुप्रै पैसा खर्च गरिर...
– डा. सुमनराज ताम्राकार यौनेच्छा के हो ? सामान्य भाषामा यौनसम्पर्क राख्ने वा यौन तनाव शान्त पार्ने इच्छालाई यौनेच्छा भनिन्छ र यौनसाथी भन्नाले यौनसम्पर्क राखिएको व्यक्ति नै बुझिन्छ । भोक, निद्रा, प्यासजस्तै यौन पनि मानव जीवनको अभिन्न आवश्यकता हो । यौनेच्छा मानसिक तथा भावनात्मक व्यग्रतासँग सम्बन्धित छ । अधिक यौनेच्...
दुब्लोकै कारण तनाबमा हुनुहुन्छ ? यि उपायले तपाईलाई बनाउनेछ आकर्षक
मोटौना कसलाई पो रहर हुदैन र मोटाउने मान्छे पानी मात्रै पिए पनि मोटाउछ,नहुनेलाई जति जे गरे पनि हुदैन भन्ने सामाजिक चलन छ । तर समाजले भन्ने गरे जस्तो हुदैन। नियमित ब्यायाम,स्वास्थमा ध्यान र खानपिनमा ध्यान दिनु भयो भने सजह तरिकाले मोटाउन सकिन्छ । थप जानकारीका लागि भिडियो ः https://youtu.be/htXWWDqEEUk...
कुन राशीका मान्छे कति कति सेक्सी हुन्छन् ?
हामी सबैलाई थाहा छ एक ब्यक्ति अर्को भन्दा फरक हुन्छ । मानिस अनुसार रुची पनि फरक फरक हुन्छन् । कसैलाई गुलाफ मन पर्छ त कसैलाई गुराँस । कसैलाई गुलियो खान मन पर्छ त कसैलाई नुनिलो । यसैगरी यौनिक मामलामा पनि मानिसहरुमा फरक फरक गुण र ब्यवहार हुन्छन् । कसैलाई यौन सम्बन्ध राख्दा सादा तरिका मन पर्छ भने कसैलाई विभिन्न तरिका अपनाउ...
अपत्यारिलो सत्य,यौन सम्पर्कबाटै ठिक हुन्छ टाउको दुखाई
काठमाण्डौ । वैज्ञानिकहरुले यौनसम्पर्क गर्दा टाउकोको दुखाई तुरुन्तै ठिक हुने नयाँ तथ्य पत्ता लगाएका छन् । उनीहरुले सेक्सलाई टाउको दुखाईको अचूक औषधि भनेका छन् । आमरुपमा सेक्सबाट यति सुख मिल्छ कि शरीर र मनको थकान मेटाउछ ।कसैको नजिक हुनु, उसलाई छुनु, प्यारले उसको शरीरको गहिराइमा आफ्नो एकान्त शेयर गर्नुले एक अलग्गै खालको न...
सेक्सको लागी बिषेश महिना ‘डिसेम्बर’,अब ७ दिन बाँकी
डिसेम्बर महिनाको विशेष कुरा यो छ की यो महिना निकै नै रोमान्टिक महिना हो । डिसेम्बर महिनामा चिसो बढेर जान्छ र यो महिना फेस्टिभल सिजन पनि हो जसले गर्दा महिना अझ राम्रो हुन जान्छ । यो महिनाको हावामा प्रेमको हावा चलेको अनुभव हुन्छ भने प्रेमको मौसमले पनि आफ्नो रंग फैलाउन थाल्छ ।आखिर किन रोमान्सका लागि यो महिना खास खास छ त र...